Isisindo Sekhabhoni China Manufacturers & Suppliers & Factory
Isisindo Sekhabhoni - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 19 ye-Isisindo Sekhabhoni)
Isisindo se-3K Carbon Fiber Sheet Light
Isisindo se-3K Carbon Fiber Sheet Light Amashidi we-Carbon fiber angumkhiqizo omusha ojwayelekile onobungane bemvelo wekhulu, wenziwe ngezindwangu ze-carbon fiber ne-epoxy resin. Ubuciko bokwenza i-prereg ngezindwangu ne-epoxy, bese busebenzisa isikhunta ukwakha. I-Custom Cnc Carbon Fib Sheet isetshenziswa kabanzi...
Isisindo esikhanyayo I-Carbon fiber 3K twill matte sheet
Isisindo esikhanyayo 3K twill matte Carbon fiber tube
Isisindo esikhanyayo I-Carbon fiber tube 3K ngendwangu elukiwe ye-Twill Plain Izici zeCarbon tube / ipayipi: 1.Introduction Lezi zi-3K Octagonal Carbon Fiber Tube zenziwe nge-carbon fiber emsulwa ngensimbi enhle noma i-weave ebonakalayo; Kutholakala ngemibala ehlukahlukene nosayizi (imvamisa ye-3K twill matte);...
Isisindo esikhanyayo Izibalo ze-Carbon Fiber Telescopic Incazelo Yomkhiqizo Singumkhiqizi ochwepheshe we-carbon fiber tube iminyaka engaphezu kwe-10. sikhiqiza I-Carbon Fibre Oval Tube , iCarbon Fiber Telescopic Tube I-Carbon Glass Tube, Ama-G10 Amabhubhane amnyama ne-ect
Isisindo se-Aluminium Round Standoff Nezikhala I-Alloy Standoff Fastener ilayishwa kwizimbobo eziyindilinga nge-punch riveting ukuze ikhuliswe ngokuqinile eshidini lensimbi. Futhi ngezinhlobo zembobo noma eziyimpumputhe ezingasetshenziswa ukuze zisetshenziswe kwikhabethe lokuphumula noma eligoqiwe, ibhodi lesifunda...
3k isicwebezelisi esikhungweni sekhabhoni
I-Carbon Fibre 3k isicwebezelisi esikhungweni sekhabhoni Sinezinhlobo ezimbili zamashubhu ekhabhoni, angama-matill kanye ne-twill gloss. Ithandwa kakhulu ngamakhasimende futhi ingasetshenziswa kahle ngama-drones. I-Carbon Fibub Tubes ephelele iyakwazi ukunikeza uhla olubanzi lokusebenza okuphezulu, ishubhu yokukhanya...
I-Carbon Fibre 3k isicwebezelisi esikhungweni sekhabhoni
I-Carbon Fibre 3k isicwebezelisi esikhungweni sekhabhoni Sinezinhlobo ezimbili zamashubhu ekhabhoni, angama-matill kanye ne-twill gloss. Ithandwa kakhulu ngamakhasimende futhi ingasetshenziswa kahle ngama-drones. I-Carbon Fibb Tube iyakwazi ukuhlinzeka ngohlobo olubanzi lokusebenza okuphezulu, ishubhu enobunzima...
Isisindo esikhanyayo iCarbon fiber tube 3K Twill Weave
Isisindo esikhanyayo iCarbon fiber tube 3K Twill Weave 1.Introduction Lawa Khabhoni we-3K Carbon Fubes Carbon ayenziwe nge-carbon fiber emsulwa ngensimbi enhle noma i-weave ebonakalayo; Kutholakala ngemibala namasayizi ahlukahlukene (imibala evamile emnyama); Izinhlobo ezenziwe ngokwezifiso zamukelwa, njengobubanzi...
Isisindo Sekhabhoni Isisindo seCarbon Fiber Tube Ukusika Amashidi Ekhabhoni Isisindo se-Carbon Fiber Sheet Izikhafu Zensimbi Zekhabhoni Ukucaciswa Kweshidi Lekhabhoni Isisindo Esikhanyayo weCarbon Tube Inkonzo yokusika Amashidi Ekhabhoni